Pascal Coin စျေး - အွန်လိုင်း PASC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Pascal Coin (PASC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Pascal Coin (PASC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Pascal Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $982 854.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Pascal Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Pascal Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Pascal CoinPASC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0651Pascal CoinPASC သို့ ယူရိုEUR€0.0549Pascal CoinPASC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0495Pascal CoinPASC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0593Pascal CoinPASC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.584Pascal CoinPASC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.409Pascal CoinPASC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.44Pascal CoinPASC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.242Pascal CoinPASC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0865Pascal CoinPASC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0901Pascal CoinPASC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.46Pascal CoinPASC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.505Pascal CoinPASC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.349Pascal CoinPASC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.88Pascal CoinPASC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.98Pascal CoinPASC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0892Pascal CoinPASC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0978Pascal CoinPASC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.03Pascal CoinPASC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.453Pascal CoinPASC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.87Pascal CoinPASC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩77.18Pascal CoinPASC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦24.77Pascal CoinPASC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.78Pascal CoinPASC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.8
Pascal CoinPASC သို့ BitcoinBTC0.000005 Pascal CoinPASC သို့ EthereumETH0.000163 Pascal CoinPASC သို့ LitecoinLTC0.00108 Pascal CoinPASC သို့ DigitalCashDASH0.000625 Pascal CoinPASC သို့ MoneroXMR0.000687 Pascal CoinPASC သို့ NxtNXT4.65 Pascal CoinPASC သို့ Ethereum ClassicETC0.00898 Pascal CoinPASC သို့ DogecoinDOGE18.04 Pascal CoinPASC သို့ ZCashZEC0.000646 Pascal CoinPASC သို့ BitsharesBTS2.47 Pascal CoinPASC သို့ DigiByteDGB2.38 Pascal CoinPASC သို့ RippleXRP0.211 Pascal CoinPASC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00218 Pascal CoinPASC သို့ PeerCoinPPC0.229 Pascal CoinPASC သို့ CraigsCoinCRAIG28.89 Pascal CoinPASC သို့ BitstakeXBS2.7 Pascal CoinPASC သို့ PayCoinXPY1.11 Pascal CoinPASC သို့ ProsperCoinPRC7.96 Pascal CoinPASC သို့ YbCoinYBC0.00003 Pascal CoinPASC သို့ DarkKushDANK20.33 Pascal CoinPASC သို့ GiveCoinGIVE137.24 Pascal CoinPASC သို့ KoboCoinKOBO14.16 Pascal CoinPASC သို့ DarkTokenDT0.06 Pascal CoinPASC သို့ CETUS CoinCETI182.98